Kedu ihe ndị na-ere ahịa Digital na-eme?
Kedu ihe Digital Marketer na-eme?
Tọzdee, Machị 19, 2015 Saturday, May 7, 2016 Douglas Karr
Ka anyị meghee site n’ikwu na m nwere ọrụ onye a n’okpuru, heh. Dịka onye na-azụ ahịa dijitalụ, anyị na-agagharị site na ndị ahịa anyị niile kwa izu, na-enyocha arụmọrụ ha, na-eme mgbanwe, nyocha, na-eme atụmatụ ma na-eme mkpọsa ọtụtụ ọwa. Anyị na-eji ngwaọrụ karịa ihe infographic a kọwara - site na nkwukọrịta, mbipụta, na ngwa ọrụ yana nyocha.
IMO, ọtụtụ ndị ọchụnta ego na-arụ ọrụ na mpaghara kachasị mma ha. Ọ bụghị ihe ndabara na ọwa ahụ na-arụ ọrụ kacha mma maka ha n'ihi na ọ bụ nke ha maara nke ọma. Inwe ihe nyocha nke siri ike bu ma obu ihe kachasi ike nye ndi ahia dijitalụ taa n'ihi na o na enyere ha aka ihu karia nkasi obi ha ma hu ohere ma obu oghere di site na uzo ndi ozo. Ọ bụghị naanị etu otu chanel na-arụ ọrụ, ọ bụ etu channelụ niile siri arụ ọrụ ọfụma ma ọ bụrụ na akpọbara ha nke ọma.
Karịa ike dị mfe iji iji mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ahịa dijitalụ chọrọ nghọta nke àgwà ndị na-azụ ahịa na mkpali, ikike ịmepụta nchịkọta, na iso ndị ahịa na-ekwurịta okwu nke ọma. Lelee ihe kpọmkwem dijitalụ ahịa bụ, gịnị mere na ọ dị mkpa, a ụbọchị na-ndụ nke a dijitalụ marketer na-esi banye ụlọ ọrụ.
Ndị na-ere ahịa dijitalụ nwere ọrụ, na njedebe nke ụbọchị, maka mmata ụlọ, na-enye nyocha na atụmanya, na ịchụpụ atụmanya ruru eru na ntụgharị. Ọrụ ahụ siri ike taa karịa ka ọ dị ọbụna n’otu afọ gara aga. Uzo a na-etolite n'ime ahihia ahia, nnukwu data na Gụgharia data na-enye ohere oge maka mgbanwe mgbanwe ahịa, na ndị na-ege ntị dị iche iche gafee usoro dị iche iche nke ọwa na ngwaọrụ na-agbakwunye mgbagwoju anya na-enweghị njedebe iji nweta ozi ziri ezi nye onye ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị.
Nke ahụ kwuru, ọtụtụ ndị na-ere ahịa dijitalụ na-ahụkarị otu mpaghara, ebe ndị ọzọ na-amasị ụlọ ọrụ anyị gbado anya na ịkpọ oku na usoro ziri ezi nke atụmatụ. Mgbe ahụ, anyị na-eweta ndị ọkachamara na tebụl iji nyere aka na njikọta, akpaaka, nkwukọrịta na ogbugbu nke atụmatụ ndị ahụ ma ọ bụ na anyị na ndị otu ahia na-arụ ọrụ ugbu a na-arụ ọrụ.
Tags: ụbọchị na ndụụbọchị na ndụ nke onye na-ere ahịa dijitalụdijital ahịainfographicahiaKedu ihe ahịa ahịa dijitalụ na-eme
10 Elele ọ bụla obere azụmaahịa na-ahụta site na Digital Marketing Strategy
Usoro Searchgwọ Akwụ ụgwọ Kachasị Ego na Bing - na Otu esi egbochi ha